China XMT-JK408 Series Multi Way Ubushushu Intelligent Controller yoMvelisi kunye Supplier | Gongyi
XMT-JK408 Series Multi Way Intelligent Ubushushu Controller
XMT * JK ndlela-ezine lobushushu controllerInstruction manualⅠ, SummaryXMT * JK ndlela-ezine iqondo lobushushu isilawuli nga ukuqhagamshela abenzi boluvo ezine synchronously encedisayo, sehlise umthamo isixhobo ngayo. Kuye indlela auto-tune eyahlukileyo nokusebenza PID parameter kunye ngqo ngakumbi reliabili ngakumbi ...
XMT * JK ndlela-ezine lobushushu isilawuli
XMT * JK ndlela-ezine iqondo lobushushu isilawuli nga ukuqhagamshela abenzi boluvo ezine synchronously encedisayo, sehlise umthamo isixhobo ngayo. Kuye indlela auto-tune eyahlukileyo nokusebenza PID parameter kunye ngqo ngakumbi kwaye nokuthembeka ngakumbi kulawulo umatshini yonke.
Ⅱ, izinga lobuchwepheshe Primary:
1, isiginali Input : CU50 (-50.0 ~ 150,0 ℃), Pt100 (-19.9 ~ 600,0 ℃), K (0 ~ 1300 ℃),
E (0 ~ 700,0 ℃), J (0 ~ 900,0 ℃)
2, Ukuchaneka: ± 0.5% Fact ± Byte
3, Isiphumo indlela: ukuthumela AC220V 3A (umthwalo ukumelana)
4, ulawulo imowudi: ulawulo-on umahluko / off nokulawula PID
5, amandla Input: AC110 ~ 242V 50 / 60Hz
6, Environment Ubushushu: 0 ukuya 50 ℃, Ukufuma: ≤85% RH
7, Face Ubukhulu: 160 × 80 × 110 mm Hole Ubukhulu: 152 × 76 mm 96 × 96 × 110 mm Hole Ubukhulu: 92 × 92 mm 72 × 72 × 110 mm Hole Ubukhulu: 68 × 68 mm
Ⅲ, ibhodi iPhaneli ukufundiswa
Ⅳ, scheme uqhagamshelo
PS: 1, Mini uqhagamshelo yomshicileli
2, RS485 yonxibelelwano: qhagamshela esihambelanayo 'VA +, VB-'.
3, RS232 yonxibelelwano: qhagamshela esihambelanayo 'R', 'T', 'GND'.
4, omnye kuphela umsebenzi ingasetyenziswa phakathi imisebenzi umshicileli kunye nonxibelelwano ngexesha elinye.
Ⅴ, Code mode sentlalo
Ⅵ, ekwandiseni Technical
1.Accurately ukudibanisa uires njengoko Isalathisi kuxhulumano, namandla.
2.Press 'iqhosha SET' imizuzwana 3, ngena kuqala menu.then 'parameter' kunye kula- ixabiso paraneter zizakuboniswa ngokwahlukeneyo malunga 'window CH1' yaye 'window CH2', uyakwazi ukunyenyisa ezi parameters ngokuthi poressing '▲', '▼', '◄', uze ugcine isethingi ngu prwss 'iqhosha sET', zonke parameter kufuneka zigcinwe emva awafake, koko angene parameter esilandelayo.
3.You Ungacofa 'CH1', 'CH2', 'CH3', 'CH4' imizuzwana 3 ukungena corrseponding menu channel .Emva wagqiba omnye parameter iseti, cinezela 'SET' ukuyigcina, uze kungena parameter esilandelayo .
Ⅶ, Ukubeka ngokwayo
Ukusetyenziswa imitha ngexesha lokuqala okanye indawo kufuneka ngokutshintsha, abayifumanayo ukulawula akulungile, kweli xesha ufuna ukusebenzisa isicwangciso ngokwayo. Umzekelo: I iseti yokuqala ye AT = 1, flickered AM ukukhanya, imitha kungena sentlalo ngokwawo, cofa iqhosha SET kungena setting parameter. Cwangcisa i Hy ngu 0.5 ~ 1 ℃, ukuba kuphume u relay ukuseta t = 2, imitha kufuneka izihlandlo ezithathu sendlebe, oluzenzekelayo P walondoloza, mna, D parameter kunye AM isibane, isicwangciso ngokwawo ukugqiba.
Ⅷ ,F ukushaya A nalysis no C learance
XMT * JK408 amkele inkqubo yemveliso ophezulu, yaye uvavanyo engqongqo ngaphambi kokuba mveliso, oko kuphuculwe ukuthembeka imitha .Le nandzu yesiqhelo ezibangelwa ngokusebenza engalunganga okanye isicwangciso parameter .Ukuba ukufumana isiphoso ayikwazanga ukumelana, nceda ukuyibhala, kwaye uqhagamshelane ne-arhente okanye nathi. Sheet 8-1 kona zisaqhubeka XMT * JK408 kwisicelo ngemihla:
Sheet 8-1 iphutha Common yokulahla
★ bathi: inkampani yethu iya kuphucula iteknoloji imveliso, uyilo kunye neenkcukacha, oko ukuqinisekisa ukuba into.
Okuqhotyoshelwe 1: Ingxelo unobumba parameter ingqalelo imitha neleta IsiNgesi
Previous: XMT-JK208 Series Multi Way Intelligent Ubushushu Controller
Next: XMT-JK808 Series Multi Way Intelligent Ubushushu Controller
Digital pid Ubushushu Controller
Din Rail Ubushushu Controller
pid Ubushushu Controller
pid Ubushushu Controller Ngokuba sesitovu
XMT-908P Series Intelligent system ehlelwe ...
XMT-808P Intelligent Ubushushu ehlelwe ...
XMT-JK808 Series Multi Way Tempera Intelligent ...
XMT-908 Series Universal Uhlobo Input Okrelekrele ...
XMZ-J8 Multi Way Ubushushu Intelligent Itiner ...
XMT-9000 Series Igalelo Single Uhlobo Intelligent ...
ubushushu Controller, Digital Temperature Controller, pid Ubushushu Controller Ngokuba sesitovu , 4-20ma Pt100 Temperature Transmitter, pid Ubushushu Controller , Zonke iiMveliso